Ifulethi langoku elinabantu aba-2 balindelwe kwindawo esembindini ngombono weTraunstein kunye neNetflix yasimahla.
malunga ne-40 m² ilungiswe ngokupheleleyo kwaye isanda kufakwa indawo yokuhlala enengqwalasela enkulu kwiinkcukacha kwaye zonke izibonelelo kufuneka zifane nekhaya lesibini xa uhlala ixesha elifutshane okanye ixesha elide, apho unokuphumla kwaye uzive ulungile. Kukho igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlala elinebhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nekhitshi.
Thatha ikhefu eGmundner Villa njengomqambi odumileyo uCarl Goldmark (1830 ukuya ku-1915), owake wachitha iinyanga zasehlotyeni apha.
Ngombulelo kwiindonga ezityebileyo zezitena, akukho moya womoya ofunekayo; Oku kuqinisekisa ubutsha bendalo kunye nobumnandi ehlotyeni.
Indawo yokungena eyahlukileyo enebhokisi yesitshixo yenza ukuba ungene ngaphandle koqhagamshelwano. Indawo yethu yesi-2 ikwindawo ezolileyo kwaye kukuhamba nje imizuzu eyi-8 ukusuka kwiziko / iTraunsee. Unokwenza yonke into ngokukhawuleza kwaye kulula kwiimfuno zakho zemihla ngemihla ngeenyawo okanye ngemoto. Indawo yokubhaka enendawo yakusasa, iivenkile zokutyela, iivenkile, ivenkile yokucoca, iposi kunye neendawo ezibonwa eGmunden zonke zikumgama wokuhamba.
Ukuba ukhetha ukuhamba ngeenyawo, iGmundner Glücksplatz entle ilungele ukuhamba. NgeGoldmarkstiege ungahamba ngemizuzu emi-5 ukuya eKalvarienberg (Glücksplatz) ngombono omangalisayo phezu kwechibi lonke kunye neTraunstein. Uhambo olude, malunga nemizuzu engama-25, uhambo oluya kwinqaba entle ye-Orth lufanelekile.
I-tram yi-800 m ukusuka kwindlu kwaye iya kwisikhululo sikaloliwe ukuba ukhetha ukuhamba ngololiwe.